Wax ka qabashada cusub ee mudnaanta leh: Shaqaale yaraan, casriyeyn, badbaado
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Wax ka qabashada cusub ee mudnaanta leh: Shaqaale yaraan, casriyeyn, badbaado
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Wax ka qabashada cusub ee mudnaanta leh: Shaqaale yaraan, casriyeyn, badbaado.
Waxaa jiri doona caqabado iyadoo hawlgallada wax ka qabashada dhulka ay kor u kacayaan si loo daboolo baahida sii kordheysa iyadoo warshadaha duulista ee ka soo kabashada COVID-19 ay sii socoto.
Shaqaale badan oo xirfad u leh wax ka qabashada dhulka ayaa ka tagay warshadaha mana soo laabanayaan.
Laba qalab oo muhiim ah oo loogu talagalay maamulayaasha dhulka waa IATA Ground Operations Manual (IGOM) iyo IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO).
Digitalization-ku waxa ay dhaqaajin kartaa hagaajinta habka kuwaas oo muhiim u noqon doona horumarinta waarta iyo wax soo saarka labadaba.
The Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) waxa ay diiradda saaraysaa halbeegyada, digitalization iyo wax ka qabashada shaqo yaraanta xirfadda leh si loo dhiso adkeysiga iyo hubinta waarta muddada dheer ka dib masiibada ee hawlaha maaraynta dhulka.
"Waxaa jiri doona caqabado iyadoo howlaha wax ka qabashada dhulka ay kor u kacayaan si loo daboolo baahida sii kordheysa iyadoo warshadaha duulista ay ka soo kabanayaan COVID-19 ay horumarayaan. Ka gudubka shaqala'aanta, hubinta badbaadada iyadoo si adag loogu hoggaansamo heerarka caalamiga ah iyo casriyeynta iyo casriyeynta ayaa muhiim u noqon doonta helitaanka dib-u-bilaabid la qiyaasi karo," ayay tiri Monika Mejstrikova, Agaasimaha Hawlaha Dhulka ee IATA, oo ka hadlaysay 33rd. IATA Shirka Maamulka Dhulka (IGHC), oo ka furmay Prague maanta.
Bixiyeyaasha wax ka qabashada dhulka ayaa wajahaya xirfad yaraan ba'an iyo caqabado xagga haysashada iyo qorista shaqaalaha.
Shaqaale badan oo xirfad leh ayaa ka tagay warshadaha mana soo laabanayaan. Iyo qoritaanka, tababarka iyo aqoonsiga shaqaale cusub waxay qaadan kartaa ilaa lix bilood. Markaa, waa muhiim in aan hayno shaqaalaha hadda jooga oo aan helno habab hufan oo lagu fuulo shaqaale cusub, "ayuu yidhi Mejstrikova, oo sidoo kale qeexay dhowr xalal oo mudnaan leh.
Si loo sii haysto shaqaale xirfad leh, dawladuhu waa inay ku daraan hawl-wadeenada barnaamijyada kabidda mushaharka
Si loo dedejiyo hababka tababarka, waa in la kordhiyaa adeegsiga tababar ku salaysan karti-xirfadeed, qiimayno iyo qaabab tababar online ah, iyo shuruudaha tababarka waa in la is waafajiyaa.
Si loo kordhiyo waxtarka isticmaalka shaqaalaha, baasaboorka tababarka waa in la sameeyaa kaas oo si wadajir ah u aqoonsan kara xirfadaha maamulayaasha dhulka, diyaaradaha iyo/ama garoomada diyaaradaha.